အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို ဖတ်ရှုရန် - Property knowledge | iMyanmarHouse.com
[Unicode] မိမိတို့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရင်း မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အပူအပုပ်တွေ နဲ့ အဆိပ်တွေကို...
[Unicode] ကျွနု်ပ်တို့ အများစုက အစားအစာသိမ်းထားတဲ့ ရေခဲသေတ္တာကို အရေးမပေးတတ်ကြပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အစားအစာတွေကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သိမ်းထားချင်တယ်၊ အချိန်ကြာကြာ ကောင်းမွန်အောင် ထားချင်တယ်ဆိုရင် ဒါသိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အစားအသောက်ကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့...
[Unicode] မီးပူတိုက်တဲ့အခါမှာ မီးအား မတော်တဆများသွားလို့ အကျီ ၤတွေ ကျွမ်းသွားတဲ့အခါမှာ အဲဒါတွေဟာ ခွာမရပဲ ကပ်ကျန်နေနေတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တော်တော့်ကို ဆိုးဝါးပြီးတော့ ခွာမရပဲ မီးပူထပ်တိုက်မိတဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူပဲ တစ်ခြားသောအင်္ကျီတွေကို...
[Unicode] ရှားစောင်းလက်ပတ်အပင်ဆိုတာ ခြံနဲ့မြေအကျယ်ကြီးရှိမှ၊ သေသေချာချာမြေသြဇာတွေနဲ့ စိုက်မှ၊ အမြဲတမ်းပြုစုယုယမှ ရှင်သန်ကြီးထွားလာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ မြေအိုးလေးထဲ သူ့ရဲ့အကိုင်းလေးတစ်ကိုင်ကို စိုက်မယ် တစ်နေ့ ၂ ခါလောက် အနည်းဆုံးရေလောင်းပေးရုံနဲ့တင်ကို...
[Unicode] ဆပ်ပြာဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ ဒါမှမဟုတ် ညစ်ပေနေတဲ့ အရာတွေကို သန့်ရှင်းစေဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ အရည်ပုံစံ၊ အခဲပုံစံနဲ့ တစ်ခါတလေ သင်းပျံ့တဲ့အနံ့ပါပြီး ရေ၊ ရေမြှုပ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပွတ်တိုက်တဲ့အခါ အမြှုပ်အများကြီးကို...
[Unicode] ဆီ (ဟင်းချက်ဆီ) ဆိုတာက ဟင်းလျာတိုင်းမှာ မပါမဖြစ် ပါဝင်ရတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဟင်းတစ်ခုကို ချက်ပဲ ချက်ချက်၊ ကြော်ပဲ ကြော်ကြော်၊ အသုပ်ပဲ သုပ်သုပ် ဆီမပါရင် မရပါဘူး။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ငါးခြောက်လေး မီးကင်ပြီးရင်လည်း စားကောင်းအောင်ဆိုပြီး...
[Unicode] ဒီနေ့ ဘာဟင်းလဲ…. ကြက်သားအာလူး၊ နောက်နေ့ရောက်တော့လဲ ကြက်သားကြော်နဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ်၊ နေ့တိုင်းနီးပါး ကြက်သားပဲ စိတ်တောင်ညစ်လာပြီ ဆိုသူလေးတွေ ရှိနေပြီလား………… ဒါဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ကြည့်နော်။ ကြက်သားစားတာ ကျန်းမာရေးအတွက်...
[Unicode] ဆပ်ပြာမှုန့်ကို အရင်ဆုံးသုံးခဲ့ကြတာဆိုပေမဲ့လည်း အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ဆပ်ပြာရည်က ပိုပြီးရေပန်းစားလာတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ဆပ်ပြာရည်က ပိုပြီးတော့ပဲ အသုံးပြုရကောင်းနေလို့လား? ဒါမှမဟုတ် ဆပ်ပြာမှုန့်ကပဲ ပိုကောင်းတာလား? အဝတ်လျှော်တယ်ဆိုတာ...
[Unicode] မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် တင်သွင်းချုပ်ဆိုသော စာချုပ်များမှလွှဲ၍ အခြားမည်သည့်စာချုပ်တွင်မဆို စာမျက်နှာတိုင်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် တင်သွင်းသည့်စာချုပ်များသည် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထား ကြောင်းနှင့်...
[Unicode] နေ့လည်စာလေးစားပြီး သောက်ပြီးလို့ နေ့ခင်းနေ့လယ်ချိန်ကို ရောက်ရင် အိပ်ချင်သလိုလို အိပ်ငိုက်သလိုလိုမျိုး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာ ဓမ္မတာပါပဲ။ လူအများစုမှာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို ကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အလုပ်ပါးချိန်တွေ၊...